Kuwana kukwidzwa kweAmazon kukwidza kungave kuri kwakaipisisa kungaitika. Kunyangwe, kana iwe usingakwanise kugadzirisa mamiriro acho saka unogona kutikumbira kuti tikutsigire. Nezve zera, isu tichiri vechidiki asi maererano neruzivo, isu tine vamwe vane ruzivo rwekumiswa kweAmazon nyanzvi dzekumisikidza. Vashandi vedu vane ruzivo rwakadzama muiyo niche uye vane makore echiitiko mumunda. Kunze kwaizvozvo Plus Global Ecommerce inopa zvimwe mabasa sekudzivirira kwekumiswa, kuongororwa kwehutano hweakaunzi, kuwedzera kwekutengesa, nezvimwewo. Tinovimba izvi zvinogona kunge zviri zvekubatsira kwauri. Zvakare, ndinokutendai nekuiverenga kusvika kumagumo.